Madaxweynaha Kenya oo ku gacansaydhay Go’aankii Maxkamadda ICJ | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxweynaha Kenya oo ku gacansaydhay Go’aankii Maxkamadda ICJ
Madaxweynaha Kenya oo ku gacansaydhay Go’aankii Maxkamadda ICJ
Madaxweynaha waddanka Kenya, ayaa gaashaanka u daruuray xukunka Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda eemurankii badda ee u dhaxeeyay Kenya iyo Soomaaliya.
Uhuru Kenyatta, ayaa ka digay in go’aanka Maxkamadda ICJ ay inta badan baddii lagu muransanaa ay ku siisay Soomaaliya uu waxyeelayn doono xidhiidhkii ka dhaxeeyay labada dal.
Dowladda Kenya ayaa horey maxkamadda ICJ ugu eedeysay in aysan dhexdhexaad ahayn, waxayna tilmaamtay in aysan aqbali doonin xukunka maxkamadda. Sidoo kale dowladda Kenya ayaa gebi ahaanba isaga baxday xubinimada maxkamadda.
Aagga ama nawaaxiga la isku haysto wuxuu gaarayaa 100,000km oo isku-wareeg ah, oo seddax xagal ah, kuna yaalla Badweynta Hindiya, waana aag loo maleynayo in shidaal iyo gaas badan ay ku jiraan.
Madaweynaha Somaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed “Farmaajo” ayaa sheegay in go’aanka kasoo baxey Maxkamadda Caalamiga ee Caddaaladda, ee ku saabsanaa muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya, uu yahay mid caddaaalad ah.
Isagoo hadlayay ka hor go’aanka maxkamadda, Mahdi Maxamed Guuleed oo ah Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya, wuxuu BBC u sheegay: “Waan aaminsannahay in xukunka uu yahay hannaan… Waa sababta aan u nimid maxkamadda”.
Khilaafka wuu sii soconayaa – Falanqeynta Ferdinand Omondi
Ma jirin dal doonayay in xukunka uu sidan u dhaco, balse Soomaaliya ayaa faraxsan.
Waxay heshay inta badan dhulkii ay sheeganeysay, Kenya dhankeedana waxay ku hanjabtay in aysan waxyarna ka tagi doonin.
Madaxda Soomaalida ayaa shucuurtooda ku cabiray farriimaha ay baraha bulshada soo dhigayaan.
Dhanka kale, Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya waxay sheegtay in ay ku taagan tahay go’aankeedii isbuucii hore ee ahaa in aysan aqbaleynin xukunka ICJ.
Su’aasha waxay tahay, maxaa xiga arrintan, yaase meel marinaya xukunka maxkamadda?
Kenya waxay muujisay in ay dagaal u gali karto sidii ay u difaaci lahayd “dhulkeeda” – Saldhig ciidamada badda ay ku leeyihiin nawaaxiga lagu muransan yahay ayaa dhowaan la sii hormariyay.
Soomaaliya ma lahan ciidamo bad oo awood badan leh, balse waxay leedahay dalal saaxiibbo la ah.
Balse dagaalka ma ahan arrinta ugu horeysa ee labadan dal laga filayo.
Waxaa dhici kara wadahadallo kale, ama khilaaf diblumaasiyadeeda. Ama labadaba.
Kenya waxay ku doodeysaa in aysan marka horeba ahayn in ICJ la soo dhexgeliyo arrintan “maadaama uu jiray is-afgarad”.
Balse bishii March ee sannadkan ayay si rasmi ah uga baxday kiiska maxkamadda, ka dib markii laga diiday in dib loogu dhigo dhageysiga maxkamadda.
Waxay sidoo kale cuskatay in garsooreyaasha maxkamadda uu ka mid yahay qof Soomaali ah, waxayna dalbatay in laga saaro.
Isbuucii la soo dhaafay waxay Kenya ku dooday in kiiska uu yahay “hannaan garsoor oo khaldan”. Waxay intaa ku dartay in “eex iyo cadaalad darro ay ku dhexjirto”, iyo in maxkamadda ay tahay meel aan u qalmin in khilaafka xal loogu helo.
Previous articleBerbera: Khilaaf soo kala dhexgalay Ururka Gaadiidka Xamuulka qaadda
Next articleAl-shabaab oo sheegatay qarax lala beegsaday Ciidammada Kenya